Cuntada cuntada | February 2020
Ugu Weyn Ee Cuntada cuntada
Nadaafad habboon oo ah xanuunka laga bilaabo maalmaha ugu horreeya nolosha
Geese waxay ka tirsan yihiin digaagga picky. Daryeelidda iyaga, iyo sidoo kale diyaarinta nafaqo habboon ma noqon doonto dhibaato aad u weyn. Bishii kowaad ee goosta dhalida cusub ayaa kaalin weyn ka ciyaara noloshooda. Waqtigaan, waxaad u baahan tahay inaad qabanqaabiso dayactirka habboon iyo nafaqada ee chicks. Goob gaar ah waxaa ku yaala haraaga cuntada.
Sidee loo quudiyaa xabada guriga
Geese waxaa loo tixgeliyaa habka daryeelka iyo nafaqada. Doorka ugu muhiimsan ee horumarintooda habboon waa bilowga ugu horreeya nolosha. Wakhtigan waxaa lagama maarmaan ah in si habboon loo abaabulo ma aha oo kaliya content, laakiin sidoo kale nafaqada ee chicks. Aad bay muhiim u tahay in ay tahay tayada sare oo miisaaman waqtiga oo dhan. In this article waxaad ku baran doontaa waxa cunto ah ee berriga waa ka kooban tahay laga bilaabo dhalashada ilaa da'da buuxa.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cuntada cuntada 2020